Cabitaannada caadiga ah ee laga helo England iyo London, maxay yihiin? | Safarka Absolut
Ma taqaanaa cabitaanka caadiga ah ee England? Boqortooyada Midowday, shaki la’aan waa mid kamid ah kuwa ugu booqashada badan uguna badan ee dalxiisayaasha, laakiin gaar ahaan England, maadaama ay kamid tahay kuwa ugu caansan dhaqankooda gaarka ah, muuqaalka iyo dhaqanka. In kasta oo xaqiiqda ay tahay London inay tahay caasimadda England, haddana waxay u timid inay soo jiito inta masaafada iyo caadooyinku saamaynta ku leeyihiin, taasoo ka dhigaysa labadan xisbi inay yeeshaan cuntooyinkooda iyo cabitaanadooda ay jecel yihiin inkasta oo ay isku qaran yihiin
Hadda si gaar ah waxaan uga hadlaynaa arrimaha cabitaannada caadiga ah ee ka yimaada Ingiriiska iyo London, in shaki la'aan aad ka fiirsato isku dayga, maaddaama gastronomy-keeda uu aad u hodan yahay kiiskanna cabitaannadu ay isku mid yihiin.
1 Cabitaanada caadiga ah ee England
1.2 Casiirka tufaaxa kulul
1.3 Biyaha shaciirka
1.4 Biyaha Malab iyo khamri
2 Cabitaanada caadiga ah ee London
2.2 Biyo qabyo ah
Cabitaanada caadiga ah ee England
Way cadahay, tan iyo shaahu waa caado aad ugu xoogan England, waxay ku qaataan quraacda, cashada, iyo mararka qaarkood cuntada, Waan ku madoobaa ama adiga caadi baad tahay Way jecel yihiin, waa wax ay ku farxaan inay ku dul ridaan caano iyo macaaneeye, sida caadiga ah kaligood ayey qaataan oo iyaga oo aan wax wehelin sida rootiga ama buskudka.
Marar badan waxay jecel yihiin inay shaaha kula diyaariyaan kan xididdada l dandvetann, sida kuwa kale ee lagu sameeyo caleemaha misigta ubax.
Casiirka tufaaxa kulul
Cabitaan ah in waxaa badanaa la caba xilliga qaboobaha waxaana la siiyaa marka midhaha ay soo martay dhowr marxaladood oo halsano ah.
Badanaa loo tixgeliyey soodhaha, waa a cabitaanka caadiga ah ee England halka ay cadeynteeda ugu weyni ay noqon doonto shaciir, taas oo ay qasab tahay in la kariyo si hadhow loo miiro, dareeraha ka soo baxa ayaa lagu shubi doonaa saxarka miraha oo hadhoow dhadhamin doona dhadhankiisa.
Biyaha Malab iyo khamri
Biyaha malabku waa biyo malab leh oo soo maray geeddi-socodka halsano, dhanka kale, khamrigu aad buu ugu badan yahay jidadka Ingiriiska, waxaa loo isticmaalaa in lagu raaco cuntada, iwm.
Cabitaanada caadiga ah ee London
Waa inaan xusuusnaano in kastoo London iyo England ay yihiin laba meel oo aad isugu dhow, mararka qaarkoodna caadooyinka iyo caloosha way isbeddeli karaan mararka qaarkoodna ma beddelan karaan. Marka xigta waxaan kuu sheegi doonaa waxa ka mid ah cabitaannada caadiga ah ee London.
Halkan, shaaha sidoo kale waxaa badanaa loo cabaa si aad u badan, waxa loogu yeero "Shaah galabtii " mid madow ama mid caadi ah, badanaa way cabaan saacadaha oo dhan. Marar badan waxay badanaa ku raacaan caano ama macaan macaan, waxay ku xiran tahay qof walba dhadhankiisa iyo tixgelintiisa.
Laakiin iyagu ma cabbaan shaah oo keliya, kafee ayaa ka faa'iideysanaya Guryo badan oo Ingiriis ah iyo baarar, waxaa lagu cunaa inbadan iyo in ka badan waxaana badanaa loo adeegaa waqti aad u dheer, laakiin ku kalsoonow in markasta oo aad rabto aad heli karto espresso koob guud ama ceel. Qaxwaha waxaa weheliya caano, ama waa la qaadan karaa kafee mocha, cappuccino leh xumbo caano ah, qaata Ama wax kasta Sharoobada dhadhanka leh baararka qaarkood iyo qolalka nasashada.
Biyo qabyo ah
Biyo qabyo ah ayaa aad u badan dabeecad london waana mid aad loogu taliyaa in la dhadhamiyo, xitaa in ka sii badan baybaro ama baarar madaxbanaan, tan iyo markii ay isku dayeyso inay sii waddo xaalad nadiif ah oo hodan ah hawsheeda halsano, taas oo ka dhigaysa inay yeelato dhadhan gaar ah, laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya maxaa yeelay meelahan Waxay waxay ku siin doontaa jawi London aad u fiican.
Badanaa pints ayaa la siiyaa ama kiisaska kale haddii aad doorbideyso kala badh nus ayaa la siin karaa. Shaki la'aan, waa dhadhan ay tahay inaadan u seegin, waxbadan baa ka yar joojinta isku dayga.
Halkan waxaa ku yaal wax aad u dhaqameed waxaana jira dhaqan dhan oo loogu talagalay biir ah, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad booqato qaar baarka madaxa banaan, oo aan ka tirsanaan jirin xayeysiis kasta, waxaad dhadhamin doontaa biir wanaagsan, oo leh jawi aad u London ah. Kuwa ugu caansan waa lager, ka ale cirro, ka qadhaadhiyo biir madow la sumcad ama kumbuyuutar. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa ah sanjabiil ale, biir sinjibiil oo aad u macaan, kuwa doonaya inay isku dayaan dhadhan kale.
Aad baa loo amaanay loona dhadhamiyay, laakiin badanaa ma ahan wax la heli karo, waxaana badanaa lagu bixiyaa cunnooyinka gaarka ah ama dhacdooyinka muhiimka ah, in kasta oo lagu taliyay in la tijaabiyo. Waad ku raaxeysan kartaa dhowaan iyo Maqaayadaha khamriga ee cusub iyo maqaayadaha ugu caansan magaalada
Aad ayey uga fudud yihiin khamriga, iyo heer aad u sarreeya oo aalkolo ah, badanaa waxaa laga helaa baararka ama baararka yar yar, halkaas oo aad uga bogan karto iyaga oo ay weheliyaan jawiga caadiga ah ee magaalada.
Way cadahay in goobahan quruxda badani ay leeyihiin iskumid iyo xulashooyin duufsan, taas oo kugu dhiirigalinaysa inaad mid kasta oo iyaga ka mid ah tijaabiso, waxa ugu fiican ee aan kugula talin karnaa waa inaad barataa mid kasta oo ka mid ah cabitaanadan kaligaa, marka lagu daro isku dayga Gastronomy-kooda oo dabeecad leh, marwalba waa inaad aadaa raadinta khibrado cusub iyo dhadhan.
Midkee dhan cabitaanka caadiga ah ee England miyaad joogaysaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cabitaannada caadiga ah ee lagu cabbo London
maxaa doqon ah
Waan jeclahay Micole Aguirre TeeaaMooHHHH Miihhh Vidaaaaaaaaaaa
Ku jawaab raul haro
NICOLE AGUIRRRRE dijo
I haa k teamo raul had iyo jeer pleaserrrr
Jawaab NICOLE AGUIRRRE
Bog dhiig leh, waa sababta shaqada loo joojiyay oo
Waan ku jeclahay lab (L)
Waxaan ka imid Uruguay waxbana kama aqaano lonmdres, waxaan kaliya ku barto iskuulka
Ku jawaab nataly
sheeko murtiyeedka sheekooyinka sanadaha 80 domaika- dijo
bog aad ufiican in kasta oo kani yahay sarcarsticooooooo waxaan ahay kastorrrrrrr
Ku jawaab jawaabta sheeko-xumada ee 80's domaika-
Ku jawaab MEME
wax walba u mahadnaqa
Ku jawaab hanyelo